टुनिशिया - सबै दुनिया भर देखि यात्री आकर्षित गर्ने एक देश। आखिर, तपाईं परम्परा र आकर्षक इतिहास अन्वेषण गर्न, आराम, गुणस्तर सेवा र नयाँ संस्कृति डुबाउनुहोस् मौका मा गणना गर्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, सेतो बलौटे समुद्र तट मा समय खर्च गर्न संभावना बारे मा भूल छैन।
सुन्दर स्पा टाउन, एक समुद्र तट छुट्टी लागि पूर्ण छ - आफ्नो यात्रा छनौट पर्यटकहरु योजना बनाउँदा अक्सर मा होटल रोयल Jinene4साउसे (साउसे) पर्छ। स्वाभाविक, चयन गरिएको रोक बिन्दु बारेमा धेरै जानकारी भेला गर्ने प्रयास अपरिचित को शुरुवात लागि। होटल कहाँ स्थित छ र समुद्र तट र पसलहरूमा, रेस्टुरेन्ट र क्याफे कति टाढा छ? तपाईं के जीवित अवस्था lodger आशा गर्न सक्छौं? थप होटल सेवा र मनोरञ्जन प्रदान गर्छन्? ठाउँ बच्चा संग एक सुखद र सहज झुन्डिएका बाहिर लागि उपयुक्त छ कि छैन भनेर? कसरी होटल बारेमा पर्यटकहरु बोल्न? यी प्रश्नहरूको जवाफ धेरै पाठकहरूलाई लागि उपयोगी हुन सक्छ।
होटल कहाँ छ?
धेरै यात्री लागि पेन्सन को स्थान को अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यसैले होटल रोयल Jinene4कहाँ छ? साउसे (साउसे) - समुद्र को किनारा मा एक सुरम्य शहर। यो समुद्र तट मा व्यावहारिक, एक शान्त क्षेत्रमा, यहाँ छ र आधुनिक होटल छ।
यसको सबै मनोरञ्जन र आकर्षण संग शहर केन्द्र दूरी मात्र3मी छ। यो दूरी सजिलै, खुट्टा मा गर्न सकिन्छ किनभने कहिलेकाहीं साँझ शहर मा हिंड्न राम्रो, सुन्दर रोशनी द्वारा उज्यालो। साथै, यात्री मूल्यहरु पनि उच्च छैन, ट्याक्सी वा सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एल Kantaoui को सुरम्य बन्दरगाह र पोर्ट नजिकै स्थित। दूरी Monastir विमानस्थल 25 किलोमिटर टाढा छ। भ्रमण भुक्तान गर्ने यात्री होटल एक निःशुल्क र सुविधाजनक शटल लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ।
सामान्य मा, होटल को स्थान उत्कृष्ट छ: एक शान्त क्षेत्र, समुद्र तट र शहर को केन्द्र पैदल दूरी हो।
होटल रोयल Jinene साउसे 4: इलाका र अतिरिक्त जानकारी को विवरण
तुरुन्तै यो होटल एक सरल तर सुरुचिपूर्ण प्राच्य शैलीमा निर्माण धेरै चार तले भवन को एक जटिल छ भन्दै लायक छ। होटल क्षेत्र ठूलो र हरियो छ, सीधा समुद्र जान्छ। खैर, अर्को होटल अर्को स्थित छ, आफ्नो इलाकामा संयुक्त।
यार्ड होटल Jinene होटल रोयल साउसे सुन्दर र राम्रो कायम। जताततै ध्यान खुसी आँखा lawns, आकर्षक फूल, एक ट्रपिकल बगैचा र एक बारहमासी अग्लो खजुरका को रंगीन बेड क्रप। छोटो, सबै कुरा मा अतिथि आराम र समय प्रकृति नजिक खर्च गर्न सक्षम थिए भन्ने सुनिश्चित गर्न - त्यहाँ पूल स्विमिंग, terraces र अवकाश गतिविधिहरु छन्।
होटल रोयल Jinene साउसे 4: होटल कोठा को फोटो र विवरण
यो मध्यम आकारको होटल 102 कोठा को निर्वाचकगण। सबैभन्दा भाग लागि यो सहज मानक कोठा छ, तर त्यहाँ केही थप विशाल सुइट कोठा छन्। यात्री को कोठा संलग्न छन् जो balconies, देखि बगैचा वा समुद्र को दृश्य आनन्द उठाउन सक्छौं।
निस्सन्देह, सबै कोठा ठूलो काम डेस्क सहित सहज फर्नीचर, संग सुसज्जित छन्। खैर, छैन त लामो अघि मर्मत बाहिर यहाँ गरियो, त्यसैले तपाईँले नयाँ गलैँचा, एउटा वास्तविक आरामदायक र सुरुचिपूर्ण सेटिङ गणना गर्न सक्नुहुन्छ।
एक शायद यो यात्री को आराम कल्पना गर्न सक्छन् जो आज बिना घरेलू उपकरण को सेट पनि उपलब्ध छन्। अतिथिहरूको आराम र टिभीमा उपग्रह च्यानल हेर्न सक्नुहुन्छ। हावा कंडीशनिंग प्रणाली गर्मी गर्मी सामना र आरामदायक तापमान अवस्था सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ। तपाईं कल गर्न सक्षम हुनेछ, तर तिनीहरूले मूल्य मा समावेश गरिएको छैन। एउटा सानो शुल्क लागि सुरक्षित भाडामा गर्न सक्नुहुन्छ। एक ठंडा प्रणाली संग मिनी-पट्टी पनि उपलब्ध छन्, तर यो मात्र अनुरोध मा भरिएको छ।
कोठा लागि टाइल युक्त फर्श र नयाँ, आधुनिक पाइपलाइन संग बाथरूम adjoining। कोठा श्रेणी आधारमा एक विशाल बाथटब या शवर छ। तपाईंको निपटान मा व्यक्तिगत शौचालय, सिंक, व्यर्थ दर्पण र हेयर ड्रायर, सेनेटरी सुविधा र सफा तौलिया एक सेट हुनेछ।
समीक्षा कोठा साँच्चै सफा छन् भन्ने। गुणस्तर सफाई दैनिक बाहिर (वा अतिथि को अनुरोध मा) छ। हप्ताको एक पटक, कोठा मा सफा बिछ्यौना निम्त्याउने।
पाहुनाहरूको लागि आपूर्ति सर्किट
साँच्चै रमाइलो र गुणस्तर बाँकी स्वादिष्ट भोजन बिना कल्पना गर्न कठिन छ। त्यसैले के आशा गर्न सक्छौं होटल अतिथि शाही Jinene4(साउसे)? एजेन्ट बाट खरिद पर्यटन, नियम, पूर्ण भोजन समावेश गर्नुहोस्। यदि तपाईं आफैलाई बुक होटल, तपाईं एक सुविधाजनक योजना, चयन गर्न सक्नुहुन्छ मात्र नास्ता वा खाजाका लागि यो हुन।
समीक्षा एक स्थानीय रेस्टुरेन्ट र एक शक्ति आपूर्ति सर्किट साँच्चै राम्रो छ भनेर संकेत गर्छ। विशाल भवन एक पूर्वीय-शैली आरामदायक सेट। त्यहाँ पर्याप्त टेबल, कुर्सियों र बर्तन छन्।
प्रायजसो नाश्ता प्रकाश नाश्ता, सलाद, सुगन्धित पेस्ट्री, ताजा फल, अन्डा, प्यानकेकहरू, र पाठ्यक्रम को विभिन्न प्रकार, मिठाईहरू समावेश। लंच र डिनर थप विविध छन्। मेनु टुनिशिया को परम्परागत राष्ट्रिय पकवान, साथै थप परम्परागत युरोपेली खाना समावेश छ। अतिथिहरूको स्वादिष्ट सलाद, मासु र माछा साथै समुद्री भोजन र घर बनाएको केक आनन्द उठाउन सक्छौं।
सबै समावेशी प्रणाली मुक्त पेय, विशेष रस, कागति पानी, कफी, चिया धेरै प्रकार, स्वादिष्ट मदिरा र अधिक समावेश छ। पेय स्थानीय पट्टी मा विशेष सेवा गर्दै गर्दा तिनीहरूलाई केही, रेस्टुरेन्ट मा पाउन सकिन्छ। यहाँ तिमी सिर्फ बस्न सक्छ आराम र अन्य अतिथि च्याट।
खैर, तपाईं होटल बाहिर खान सक्नुहुन्छ, र शाही Jinene होटल साउसे4साउसे - एक ठूलो रिसोर्ट टाउन, त्यहाँ रेस्टुरेन्ट, क्याफे र पिज्जेरियाहरूमा को एक विशाल संख्या छ जहाँ। साथै, यात्री कहिले काँही पसलहरूमा र स्थानीय बजार जहाँ तपाईं खाना र स्वादिष्ट क्षेत्रीय भोजन दुवै खरिद गर्न सक्नुहुन्छ जानुहोस्।
समुद्र तट कहाँ छ?
निस्सन्देह, यो पर्यटक सबैभन्दा सुन्दर समुद्री तट को खोज मा टुनिशिया आइपुग्दा। के यो क्षेत्र होटल रोयल Jinene4मा प्रस्ताव छ? टुनिस, साउसे - समुद्र द्वारा एक छुट्टी को लागि एक सिद्ध ठाउँ। होटल क्षेत्र यात्रा 5-10 मिनेट भन्दा कुनै लिन्छ, तट सीधा जान्छ।
होटल को एक समुद्र तट छ: आफ्नो समुद्र तट मात्र अतिथि यहाँ बाँकी रूपमा, आउटसाइडर्स देखि बन्द छ। किनारमा नरम बालुवा, समुद्र र सुविधाजनक मा एक क्रमिक प्रवेश ढाकिएको छ। समुद्र तट शैवाल र अन्य मलबे हरेक बिहान मुक्त, त्यसैले त्यहाँ सधैं सफा छ। यहाँ यो सहज बेड र ठूलो छाते, राम्रो तरिकाले प्रत्यक्ष सूर्यका सुरक्षित छन् जो राखिएको छ। तिनीहरूले निःशुल्क प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर एक नरम गद्दा लागि भाडामा तपाईं अतिरिक्त भुक्तानी गर्न आवश्यक छ। साथै, अतिथि ठूलो सफा तौलिया (तिनीहरूले त्यसपछि साफ छ जो जमानत, बाहिर दिन) प्राप्त गर्नुहोस्।
समुद्र तट मा त्यहाँ अर्को पट्टी टाढा छ। यहाँ, पर्यटक एक स्वादिष्ट ककटेल वा chilled पेय आनन्द उठाउन सक्छौं। मेनु पनि नाश्ता छ र बरफ क्रीम घर छन्। यसलाई अतिथि राम्ररी सुसज्जित र भलिबल कोर्ट, तपाईं नयाँ मित्र को कम्पनी मा रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ प्रदान गर्दछ।
पानी मनोरञ्जन: एक पर्यटक के हुनेछ?
सूर्य स्नान र पौडी समुद्र मा - राम्रो समय बनाउन, को पाठ्यक्रम, यो छ। तर केही पर्यटकहरु मनोरञ्जन बढी सक्रिय फारामहरू गर्न रुचाउँदैनन्। समुद्र तट मा तपाईंले हल्का डुङगा, एउटा सानो चम्चा वा catamaran भाडामा गर्न सक्नुहुन्छ। एक शुल्क लागि, तपाईं पानी स्किइङ, डुङ्गा वा केले आनन्द उठाउन सक्छौं। धेरै पाहुनाहरूलाई प्यारासेलिङ आनन्द। स्थानीय तट विन्डसर्फिङ लागि आदर्श छ। अनुभवी पर्यटकहरु समुद्र तट मा सिधै बोर्ड र अन्य उपकरणहरू भाडामा गर्न सक्नुहुन्छ। Newcomers पनि एउटा सानो शुल्क लागि तिनीहरूलाई सुरू गर्न मद्दत गर्न एक अनुभवी प्रशिक्षक लेना, र आधारभूत नियम बताउँछन्।
यात्री को मनपर्ने गतिविधिहरु को एक, पाठ्यक्रम हो, डाइभिङ। समुद्र विश्व धनी र विविध छ। नजिकैको एक डाइभिङ स्कूल तपाईं भ्रमण प्राप्त आवश्यक उपकरण भाडामा जहाँ वा गर्न सक्छन् व्यावसायिक प्रशिक्षकहरु संग छिटो पाठ्यक्रम पास छ।
थप सेवाहरूको विवरण
कहिलेकाहीं सानो घरेलू समस्या राम्ररी छुट्टी बिगार्छ गर्न सक्नुहुन्छ। खुसीको कुरा, होटल जटिल शाही Jinene होटल साउसे4केही थप सेवाहरू, यात्री को आवास सुविधा डिजाइन प्रदान गर्दछ।
लगभग सबै होटल संग, यहाँ यसको आफ्नै लाँड्री, सेवा एकदम सस्तो खर्च जो छ। एउटा सानो शुल्क लागि तपाईं स्वागत मा सुरक्षित भाडामा सक्नुहुन्छ: यहाँ आफ्नो बहुमूल्य वस्तुहरू सुरक्षित छन्। यदि तपाईं प्रयोग गर्ने अभिप्राय छैन भनेर कुरा हो सजिला छ सामान भण्डारण लागि कोठामा।
होटल पनि हुनत धेरै अन्य नजिकै विनिमय अंक छन् प्रायजसो एक पाठ्यक्रम, एकदम राम्रो छ, मुद्रा विनिमय प्रदान गर्दछ। मेहमान होटल पसलमा कुराहरू अनिवार्य खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि उत्पादन र अपेक्षाकृत सस्ती मूल्यहरु को एक रोचक दायरा एक स्मारिका पसल छ।
धेरै यात्री तुरुन्तै एक कार भाडामा रुचि - यो, यो पाठ्यक्रम, शहर वरिपरि सजिलो यात्रा र बनाउँछ देश वरिपरि यात्रा को लागि नयाँ अवसर अप खुल्छ। लिन परिवहन साइट मा सिधै भाडामा गर्न सकिन्छ। एक विशाल कार पार्क, जो तपाईं निःशुल्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ पनि छ।
होटल राम्रो व्यापार केन्द्र सुसज्जित छ, तपाईं एक कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर र अन्य मेसिनरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, वा एक फ्याक्स पठाउन। लगभग सबैतिर त्यहाँ वायरलेस इन्टरनेट पहुँच पनि उच्च गति छ, कहिले काँही छैन हुनत। आवश्यक छ भने, तपाईं स्थानीय इन्टरनेट क्याफे भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुविधा र आवश्यक फर्नीचर र उपकरण संग एक विशाल सम्मेलन कोठा। हल अक्सर वैज्ञानिक घटनाहरू, व्यापार सभा र सेमिनार लागि स्थल बन्नेछ। यहाँ बिदाको छन्। खैर, संगठन को सबैभन्दा कार्य एक उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीहरु को काँध मा खण्डमा।
कसरी होटल मा अतिथि रम्न गर्न?
होटल जटिल शाही Jinene4के मनोरञ्जन प्रदान गर्न सक्छन्? साउसे - एक सुन्दर शहर, जहाँ हरेक यात्री आफ्ना लिङ्कमा कुरा पाउनुहुनेछ। तर, तपाईं होटल नै इलाका मा आफ्नो समय खर्च गर्न सक्नुहुन्छ।
मेहमान चोकमा ठूलो पूल द्वारा आराम गर्न प्रेम। पानी सधैं छत मा सफा र सहज कुर्सियों प्रबन्ध हो। यहाँ मान्छे आराम, आराम र नयाँ परिचितहरू संग socialize। समय देखि पूल एरोविक्स कक्षाहरूमा समय, पानी पोलो संगठित।
एक शक्तिशाली ताप प्रणाली संग एक इनडोर पूल। पर्यटकहरु राति वा खराब मौसम मा आराम गर्छन। तपाईं आफ्नो शिल्प को असली मालिकको एउटा अविस्मरणीय आराम को मालिश हुनेछ, जो पछि स्थानीय हैमम, भ्रमण गर्न निश्चित हुनुहोस्। थप शुल्क लागि, मेहमान हट टब वा सना प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ जो फिट राख्न रुचि यात्री निःशुल्क पहुँच छ जो एक पूर्ण टन्न भरेर जिम, एक राम्रो फिटनेस केन्द्र हो। समय समयमा प्रशिक्षकहरु व्यायाम, एरोविक्स र योग मा समूह कक्षाहरू सञ्चालन गर्छन्। तिनीहरूले पनि नि: शुल्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र लन मा बिहान व्यायाम दिन एक अद्भुत सुरु हुन सक्छ।
अन्य मनोरञ्जन लागि जाँदा साइट एक वास्तविक क्यासिनो, प्रशंसक मजा जुवा हुन सक्छ जहाँ उपलब्ध छ। त्यहाँ मात्र बच्चाहरु तर पनि वयस्क जो स्लट मिसिन, एक हल छ। अतिथिहरूको पनि बिलियर्ड्स, चेस र टेबल टेनिस को खेल संग समय खर्च गर्न। र तपाईं साँझमा पट्टी मा कराओके गाउन सक्नुहुन्छ।
होटल को क्षेत्र मा धेरै टेनिस कोर्ट छन्। यसलाई भाडामा र्याकेटहरू, बल, साथै रात प्रकाश समावेश बताए छ। किलोमिटर मात्र तीन ठूलो गोल्फ कोर्स छ होटल देखि (को पाठ्यक्रम, यो भुक्तानी मनोरञ्जन को कोटीमा पर्छ)। होटल, तपाईंले सजिलै पैदल र पनि घोडचढी लागि बाइक भाडामा गर्न सक्नुहुन्छ।
को भर दिन आगंतुकों गर्ने विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा, प्रतियोगिताहरु, टोली खेल, समूह क्रियाकलाप र अन्य, कम रोचक छैन घटनाहरू संगठित हास्यास्पद एनिमेटरहरु द्वारा मनोरंजन छन्। र तपाईं साँझमा नृत्य र acrobatic शो, प्रदर्शन धाउन प्रत्यक्ष संगीतको मजा हेर्नुहोस्, सक्षम हुनेछ।
को यात्राहरु बारेमा भूल छैन। शहर को क्षेत्र मा जानुहोस् रोचक ठाउँहरू प्रशस्त छन्। साथै, यो यात्रा गर्न र वरपरको क्षेत्र सम्भव छ। होटल तपाईं एक रोचक टूर छनौट गर्नुहोस् वा मदत गर्नेछ मार्ग बनाउन स्वतन्त्र यात्रा गर्न। शहर को केन्द्र पनि यात्रा एजेन्सीहरू जसको सेवा गर्न त महंगा छन् को एक ठूलो संख्या छ। साँझ मनोरञ्जन लागि जाँदा, रात क्लब त्यहाँ केही छन्, तर हामी सधैं एक आरामदायक पल्ट पाउन सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ एक बच्चाहरु संग परिवार को लागि कुनै पनि अवस्थामा छन्?
आमाबाबुले छोराछोरीलाई संग, सारा परिवार संग छुट्टीको खर्च गर्न जाँदैछन् जो लागि, प्राथमिकता सान्त्वना मुद्दा हो। त्यो होटल रोयल Jinene होटल साउसे4प्रस्ताव? समीक्षा यस होटल परिवार छुट्टी लागि उपयुक्त छ भन्छन्। यसबाहेक, यात्री को मुख्य आकस्मिक - यो सबै उमेरका बच्चाहरु संग परिवार छ।
संग, पाठ्यक्रम, को सुविधाहरु कुरा हो सुरु गर्न। दुई वर्ष मुनिका बच्चाहरु निःशुल्क होटल मा रहन, र बच्चाहरु212 वर्ष छुट छ। स्वाभाविक, कोठा को अनुरोध मा सहज गद्दा संग rollaway ओछ्यानमा छुटकारा। दुर्भाग्यवश, रेस्टुरेन्ट कुनै अलग छोराछोरीको बुफे वा खाना छ, तर खाना को चयन धेरै ठूलो छ, त्यसैले यसलाई सधैं कुनै पनि उमेर को एक बच्चाको लागि राम्रो र स्वादिष्ट कुरा पत्ता लगाउन सजिलो छ।
शाही Jinene होटल जटिल को चोकमा त्यहाँ एउटा सानो तर विशाल स्विमिंग पूल जहाँ बच्चाहरु न्यानो पानी र सुरक्षित मा वरिपरि छप सक्छ। त्यहाँ एक स्विंग संग एउटा सानो बस्ने क्षेत्र छ। र अझै त्यहाँ छोराछोरीलाई पनि शिक्षकहरूलाई र animators को पर्यवेक्षण अन्तर्गत रमाइलो हुनेछ एक मिनी-क्लब, छ। मान्छे आकर्षित, नृत्य मा लगे, विभिन्न निर्माण र टोली खेल खेल मा भाग लिन, छोटो मा, रमाइलो र आनन्द प्ले।
होटल एक अपेक्षाकृत सानो शुल्क खुसीसाथ आमाबाबुले दिने केही मुक्त समय, बच्चा पछि हेर्न भनेर अनुभवी पेशेवर नर्स को एक नम्बर विशेषताहरु।
एउटा सुन्दर पर्यटक शहर रमाइलो तरिकाहरू धेरै प्रदान - मनोरञ्जन होटल रोयल Jinene4साउसे बाहिर पाउन सकिन्छ। धेरै होटल नजिकै ठूलो पानी पार्क, तपाईं निश्चित बच्चा कम गर्नुपर्छ कहाँ छ। ठूलो र सानो स्लाइडहरू, पूल, विभिन्न पानी आकर्षण - यो सबै प्रेम बच्चाहरु मात्र होइन तर आमाबाबुको। र शहर जनावर, माछा र सरीसृप विभिन्न प्रजाति (यहाँ बच्चाहरु पनि सकारात्मक भावना धेरै प्राप्त गर्न सक्छन्) को एक ठूलो संख्या सँग एक चिडियाघर छ। कुनै पनि मामला मा नै समय मा बच्चाहरु शहर मा एक महान समय, ताजा समुद्री हावा को स्वास्थ्य समायोजन।
पर्यटकहरु के? समीक्षा र सिफारिसहरू
सम्भवतः, हरेक अनुभवी पर्यटकले जान्दछ कि धेरै मात्रामा उपयोगी जानकारी व्यक्तिहरूलाई पहिले नै एक वा अर्को ठाउँमा भेट्टाउनका लागि केही प्रश्नहरू सोधेर प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसोभए यात्रीहरू के भन्नुहुन्छ? रयल जिननेन4(सोसे) होटललाई कुन छापले छाप्छ?
समीक्षा पर्यटकहरू फरक फरक छन्: तिनीहरूमध्ये केही बित्तिकै छुट्टै बिदामा सन्तुष्ट हुन्छन्, र अन्य मानिसहरू होटल परिसरको काममा नोट र कमिटिहरू। होटल क्षेत्र ठूलो छ, किनकि यो मालिकसँग सम्बन्धित अन्य होटलको नजिकै छ - अतिथिहरू सबै ठाउँमा हिंड्न सक्छन्। कोठाहरूमा यात्रीहरू ताजा मरम्मत, स्वच्छता र स्वच्छतालाई ध्यान दिन्छन्। एक आवश्यक फर्नीचर हो, केहि कोठा मा बगैचा र समुद्र को एक दृश्य छ, र तिनीहरू कोठाहरुमा नियमित रूपमा सफा गरिन्छ। ठीक छ, कहिलेकाहीँ तौलियाहरू सफाईको बेलामा वितरित हुँदैन, तर पछि।
योजना "सबै समावेशी" को उपस्थिति पनि सुविधाजनक छ, किनभने होटल रेस्टुरेन्टमा खाना साँच्चै स्वादिष्ट छ। वैसे, टेबल्स नम्बरहरु को लागि आवंटित गरिन्छ, त्यसैले तपाईं टेबल को प्रतीक्षा मा लाइन मा खडा छैन। मेनु फरक छ, खासकर जब यो पापी र डिनरहरू हुन्छन्। व्यंजनहरू सधैं ताजा र स्वादिष्ट हुन्छन्, तथापि पर्यटकहरूले लामो समयसम्म यहाँ आउछन्, एक निश्चित भित्तालाई ध्यान दिनुहोस्।
शाही Jinene होटल Sousse4राम्रो सेवा छ। त्यहाँ साँच्चै विनम्र र ध्यान केन्द्रित कर्मचारीहरू यहाँ काम गरिरहेका छन् जसले सधैं सुन्न र यस समस्याको साथ मद्दत गर्न तयार छन्। वैसे, धेरै भन्दा धेरै अंग्रेजी मात्र बोल्दैन, तर पनि रूसी, जुन, केहि यात्रीहरूको लागि धेरै उपयोगी छ।
पर्यटकसँग समुद्र तटमा एकदम राम्रो समय छ, जुन धेरै सफा छ, र शहरमा धेरै मनोरञ्जन छ। होटलको फाइदाहरू यात्राहरूको लागि अपेक्षाकृत कम मूल्य समावेश छ - यहाँ तपाईं गुणस्तर र बजेट आराम गर्न सक्नुहुन्छ। यात्रुहरूले होटल रयल जेनिनि4(ट्यूनीशिया) को सिफारिश गर्दछ। सोसेस छुट्टीको लागि राम्रो स्थान हो।
पार्क होटल "SDL": समीक्षा र पर्यटक फोटो
पाम बीच3* (Kos / ग्रीस) फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
Medplaya होटल सान्ता मोनिका3* (स्पेन, Calella): विवरण र समीक्षा
धनी ग्राहकहरु लागि टर्की मा सर्वश्रेष्ठ महंगा होटल Telman Ismailov
होटल ग्रांड ट्र्रोका होटल3- बजेट छुट्टियों को लागि एक राम्रो विकल्प
"द हुलाकी गरेको सेतो रातों" चित्रकारी: समीक्षा
स्वादिष्ट र स्वस्थ बन्दागोभी
को ग्रीवा मेरुदण्ड को osteochondrosis मा योग: व्यायाम, contraindications र सिफारिसहरू